Lampard oo doonaya in halyeey kale uu dib ugu soo laabto Chelsea | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Lampard oo doonaya in halyeey kale uu dib ugu soo laabto Chelsea
Posted by: Mahad Mohamed July 8, 2019
Himilo -Frank Lampard ayaa doonaya in lagu soo daro kooxda daafacii hore ee Blues Ashley Cole ka dib markii uu noqday tababaraha Chelsea toddobaadkii hore.
Lampard ayaa la saxiixday Cole intii uu joogay Derby xilli ciyaareedkii hore oo uu ka keenay LA Galaxy , waxaana uu sheegayaa wargayska The Sun in 41 jirkan uu ka fekerayo inuu u soo bandhigo saaxiibkiisii hore ee ay isku kooxda ahaayeen booska shaqaalaha tababarka.
Chelsea ayaa Lampard u gacan galisay heshiis seddex sanno ah, waxaana uu ku bilaaban doonaa kulanka furitaanka horyaalka Premier League ciyaarta Manchester United la qaadanayaan 11-ka August.
Labada ciyaaryahan ee reer England ayaa si wadajir ah ugu ciyaaray garoonka Stamford Bridge siddeed xilli ciyaareed intii u dhaxaysay 2006 illaa 2014, iyagoo ku guuleystay Premier League , Champions League iyo afar FA Cup.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ayaa si aad ah u soo jiitay saameynta uu Cole ku yeeshay garoonka dhexdiisa intii lagu jiray Derby, waxaana uu doonayaa inuu saameyn ku yeesho qolka labiska ee Chelsea.
Previous: Masjid daryeel sugan u fidiya Darbi-jiifta Istanbul
Next: Bam kamid ah haraadigii dagaalkii 2aad ee dunida oo la helay